Sharciga doorashooyinka oo muujiyey inay xero kale ku jiraan xildhibaanadii uu Farmaajo isku haleynayey | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Sharciga doorashooyinka oo muujiyey inay xero kale ku jiraan xildhibaanadii uu Farmaajo...
Sharciga doorashooyinka oo muujiyey inay xero kale ku jiraan xildhibaanadii uu Farmaajo isku haleynayey
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda inuu ku guul darreystay dhammaan qorsheyaashii uu ugu talo-galay in uu ku dejiyo qorshe doorasho oo u suurta galinaya inuu kaga guuleysto musharaxiinta kale ee tartanka doorashada madaxtinimada la-galaya 2021-ka.
Fashilinta qorshaha ayaa loo aanaynayaa xogta kasoo dusta xafiiska madaxweynaha iyo la-taliyeyaasha aadka ugu dhow, islamarkaana la wadaaga saxaafadda si ay u baahiyaan, kadibna usii gudbta mucaaradka.
Madaxweynaha ayaa ku baraarugay dabinka uu ku socday kadib markii ay u suurta gali waysay in uu hor istaago sharciga doorashada ee baarlamaanka federaalka ka doodayo, kaasi oo u muuqda in la ansixin doono.
Xildhibaanada ugu saameynta badan baarlamanka ayaa xiriir fiican la leh Ra’iisul wasaare Kheyre, halka Madaxweyne Farmaajo uu albaabada ka xirtay xildhibaanada badankooda, waxaana hadda soo baxday in xildhibaano badan oo Farmaajo rumeysnaa inay daacad u yihiin dowladda ay noqdeen kuwa daacad u ah Kheyre kaliya.
Arirntan ayaa soo shaac baxday markii xildhibaano badan oo Farmaajo rumeysnaa inay ku aragti yihiin ay dooddii baarlamanka ku taageereen sharciga doorashooyinka ee isugu uu diidan yahay, ayaga oo ku aragti noqday Kheyre. Kheyre wuxuu rumeysan yahay in doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin, si ka duwan Farmaajo.
Siyaasiyiinta ku bahoobay talada iyo xilalka ayaa caado u ah in ay kala tagaan ama ay isku khilaafaan qorshaha kusoo noqoshada talada dalka, balse waxaa muuqata in xildhibaanada muxaafadka ay ku qanceen fursadaha soo laabashada uu Farmaajo kaga dhaw yahay Ra’iisul wasaare Kheyre.
Waxaan la qiyaasi karin heerka dhaawaca siyaasadda soo gaaray Madaxweyne Farmaajo balse waa markii ugu horreysay ee uu waayay taageerada xildhibaanada ku qoran liiska Kheyre ag yaalla, waxaana iska cad in awoodda dowladda siyaasadda ay fariisatay xafiiska Ra’iisul wasaaraha.
Dib usoo celinta saameynta siyaasadda madaxweynaha ayaa u baahan istaraatiijiyad ka qota dheer tan lagu hurdisiiyay 3-dii sano ee lasoo dhaafay, waxaana taas usii dheer in beesha caalamka ay ku caadinayso Madaxweynaha iyo baarlamaankaba in ay ansixiyaan sharciga doorashooyinka, sidoo kalena ay jiraan caqabadaha kaga imaanaya maamul goboleedyada ay ku curyaaminayaan qorshihiisa gaarka ah.
Mustaqbalka siyaasadda Madaxweyne Farmaajo ayaa galay mugdi iyo jahawareer, waxaana hadda uu madaxweynahu ku qasbanaaday in uu helo waqti ku filan oo uu kaga kabsado madadaaladii uu ku jiray, isla markaana dib u unkado howlwadeeno uu ku kalsoon yahay oo fulin kara qorshahiisa soo noqoshada.
Muddada ku habboon dib u yagleelidda koox u carbisan halganka siyaasadda adag ee wejiya badanka ah ayaa ka badan waqtiga ka harsan qabashada tartanka doorashada ee 2020/20121-ka. Halista ugu weyn ayaa kaga imaanaysa diyaarinta istaraatiijiyad cusub iyo taageereyaal dhab ah ee lagu jaangooyo waqtiga yar ee ka harsan muddo xilleedka madaxweynaha. Wuxuu u baahan yahay inuu hadda iyo kow helo xildhibaano daacad ah oo isaga un ku xiran, ayada oo ay caddahay in madaxweynaha xiga ay soo dooran doonaan xildhibaano. Xildhibaanada hadda jooga ayey u badan tahay inay soo laabtaan ugu yaraan 70%.
Si uu waqti dheeri ah u helo, oo uu isugu diyaariyo dib ugu soo noqoshada talada dalka isla markaana uu ku kala barto xildhibaanada u dhaga nugul aragtidiisa iyo kuwa muxaafadka iska dhigaya ee ah mucaaradka qarsoon ah, madaxweyne Farmaajo ayaa ku qasban in uu hor istaago ansixinta sharciga doorashada.
Codka loo qaadayo ansixinta sharciga doorashada wuxuu ka ogaanaya heerka taageerada uu ku dhexleeyahay golaha shacabka. Ogaanshiyaha awoodda siyaasadda Madxwenaha heli karo ayaa aasaas u ah qorshe walba oo uu ugu talogalay in kaga qaybgalo loolanka hoggaanka dalka sanadda 2021. Madaxweynaha ayay u muuqataa halis isla eg oo kaga soo wajahan mucaaradka muuqda iyo mucaaradka qarsoon.
Natiijada codka xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka ay u qaadayaan ansixinta sharciga doorashada ayaa noqonaysa labadan arrin midkood.
1 – Haddii sida uu doonayo wax u dhacaan oo sharciga la diido, inkasta oo aysan muuqan, codka diidmada ah waxay u noqonaysa madaxweynaha fursad hor leh, iyo in uu eedda ka timaada diidmada dusha kaga tuuro baarlamaanka, waqtigana korarsado.
2 – Codka ansixinta oo ay u badan tahay inuu dhaco, waxay caddeyn u noqonaysa tabaryarida Madaxweynaha ee awooddiisa siyaasadda xilligan iyo rajo-beelka jiritaankiisa mustaqbalka siyaasadda ee dib ugu soo laabashada xilka madaxweynenimada. Farmaajo mar walba wuu rumeysnaa in haddii xildhibaano ay codeeyaan uusan dib usoo laabaneyn, balse in sharciga uu kasoo horjeedo la ansixiyo waxay u caddeyn doontaa tuhunkiisa. Balse sidoo kale waxay abuuri kartaa dhibaato hor leh iyo inuu aqaado tallaabooyin uu ku hor-istaagayo in doorasho la qabto, taasi oo dalka gelin doonta qal-qal siyaasadeed.
Previous articlePuntland oo war cusub ka soo saartay colaadda gobolka Mudug
Next articleGuddiga Doorashada Galmudug oo ku guuldareystay dhaqan gelinta Jadwalkii doorashada